June 2013 | IT Sharing Network
Samsung Device ကို Remote controls လေး on ပြီး အင်တာနက်က ထိန်းချုပ်ကြည့်မယ်...
အရင်ဆုံး ဖုန်းပျောက်ရှာတုန်းကလို samsung account လေး ဖုန်းမှာ sing in ၀င်ထားပါ။
ပြီးရင် setting >> More >> Security အောက်က Remote controls ကို ဖွင့်ပြီး password ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ပထမတုန်းက ဖုန်းပျောက်ရှာခဲ့တဲ့ဆိုက် http://findmymobile.samsung.com/ ကိုသွားပြီး
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ mtk phone တွေ ကို root ပြုလုပ်လို့ရမဲ့ software ဗားရှင်းအသစ်ကလေးဖြစ်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ
Barcamp Pyay 2013 ကို ၁၅.၆.၂၀၁၃ နှင့် ၁၆.၆.၂၀၁၃ တွင် နှစ်ရက်ကျင်းပရာတွင် ၁၅.၆.၂၀၁၃ တစ်ရက်တည်းတွင် တတ်ရောက်သူဦးရေ ၅၀၀ ခန့် တတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ Barcamp Pyay 2013 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ် ၁. ဘားကမ့်ပြည် ၂၀၁၃ ဖွင့်ပွဲအား BCP 2013 Organizer Team Leader ဦးရဲမြင့်အောင်၊အမှတ်(၁) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်တို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ် ၂. Organizer Team Leader ဦးရဲမြင့်အောင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား ၃. ကမ္ဘာခြားပြီ စာအုပ်အားရေးသားခဲ့သော စာရေးဆရာ ဦးကျော်ဝင်းမှ ဖွင့်ပွဲအမှတ်တရ စကားပြောကြားခြင်း ၄. Barcamp Pyay ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကျဉ်း ပြောကြားခြင်း ၅. Barcamp Pyay 2013 ဖြစ်မြောက်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သော Sponsor များအကြောင်းပြောကြားခြင်း ၆. Barcamp Pyay 2013 ဆွေးနွေးဖလှယ်ခြင်းများ စတင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
Beginner's Guide to Networking ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ (တည်ဆောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အခြေခံသဘောတရားများ)
မင်္ဂလာပါ... မျိုးသူရ ရေးသားထားတဲ့ Beginner's Guide to Networking ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ (တည်ဆောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အခြေခံသဘောတရားများ) စာအုပ်ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေကတော့ 1. Introduction to Networking 2. Set of Rules (Standards) 3. Recognize and Recover Error 4. An Ethernet Frame 5. Central Device (HUB) 6. Network Addressing & IP Routing 7. OSI Model 8. Network Hardware 9. Network Standards 10. Network Toplogy 11. Network Media (or) Transmission Media 12. Building A Peer-To-Peer Network 13. Wireless Network 14. Creating User Accounts 15. Internet Access တို့ ဖြစ်ပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့သူများအတွက် Sharebeast, Minus, Dropbox မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ... ဦးအောင်လင်း ရေးသားထားတဲ့ Network အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ စာအုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. ဦးအောင်လင်းရဲ့ နိဒါန်းလေးမှာ ရေးသားထားတဲ့ စာကလေးကို ဗဟုသုတအနေဖြင့် ဦးစွာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... စတိုးဆိုင်၊ ရုံးတွေ၊ ဘဏ်တွေ၊ ကုမ္မဏီတွေမှာ ရှိသမျှ ကွန်ပျူတာတွေကို ကွန်ယက်သဖွယ်ချိတ်ဆက်အသုံပြုနေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကွန်ယက်သဖွယ်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း Internet အသုံးပြုနိုင်အောင်လည်း အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ကွန်ယက်ကို Network လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ ကွန်ပျူတာအများကြီးကို တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုနိုင်အောင် Network စနစ်နည်းပညာနဲ့ ချိတ်ဆက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီစာအုပ်မှာ အလွယ်ကူဆုံး အရှင်းဆုံး Network ကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရသလဲကို အသေးစိပ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ မူအတိုင်း တကယ့်လက်တွေ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အထိကို ရေးသားပေးထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကလေးကို လေ့လာလိုသူများအတွက် Dropbox, Minu မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ... TeamViewer 8.0.18930 Enterprise + Portable ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...TeamViewer အသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး အင်တာနက်ရှိယုံဖြင့် တစ်လုံမှ တစ်လုံ ၀င်ရောက် ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Data တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်... ( သူက အင်တာနက်သာ ရှိရင် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးက ကွန်ပျူတာကို ကိုင်လို့ရတယ် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကနေ တစ်လုံးကို လှမ်းသုံးလို့ရတယ်။ အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ.. Team Viewer အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Team Viewer အသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး အင်တာနက်ရှိယုံဖြင့် တစ်လုံမှ တစ်လုံ ၀င်ရောက် ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Data တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်... ( သူက အင်တာနက်သာ ရှိရင် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးက ကွန်ပျူတာကို ကိုင်လို့ရတယ်။ ဟီဟီ နည်းနည်းလွန်သွားပြီ ... ဒီလိုဗျ ဒီ software လေး သုံးပြီး ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကနေ တစ်လုံးကို လှမ်းသုံးလို့ရတယ်။ တစ်ခုခု ပြဿနာတက်လို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ရင် တစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ .. ကိုထင်တာကိုပြော၊ သူလည်း မမြင်ရနဲ့ တော်တော်ကို ရှုပ်ပါတယ်။ အဲတော့ ဒါလေး သုံးပြီး သူ့ကိုသာ ၀င်လုပ်ခိုင်းလိုက် .. အေးရော .. ) လေ့လာလိုသူများအတွက် Sharebeast, Dropbox, Minus သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာက Download ယူနိုင်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ဒီပို့လေးရေးဖြစ်သွားတာကတော့ ဆိုက်ထဲမှာ အကိုတစ်ယောက်မေးထားတာတွေ့လို့ရေးဖြစ်သွားတာပါ သူ့ကိုလည်း ရေးပေးပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပြီးသားဖြစ်သွားလို့ပါ ကျွန်တော်က သိပ်မရေးချင်ရှာဘူးနော် :D
အရင်ဆုံး Root မလုပ်ခင် Bootloader unlock လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ unlock မလုပ်ပဲနဲ့လည်း အရင်ဆုံး လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆို လုပ်ကြည့်ပါ။
အခုပေးတဲ့ ဆော့ဝဲက FLash Songs ကို Mp4 (or) Phone(or) ခွေသို့ပြောင်းနည်း☆☆☆ လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ ဖလက်သီချင်းတွေကို အင်တာနက်မှဒေါင်းပြီးရင်း ကွန်ပျူတာမှာ ဘဲကြည့်လို့ရပါတယ် Mp4 (or) Phone (or) ခွေ သို့ ပြောင်းလို့မရပါဘူး။ အခု ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲက အကုန်လုံးပြောင်းလို့ရပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ.... မြန်မာ unicode အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် စာအုပ်ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... လေ့လာလိုသူများအတွက် Dropbox, Sharebeast, Minus သုံးနေရာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လင့်ကနေ Download ယူသွားပါ...
Internet Download Manager 6.16 Build 1 Final ( Patch + Crack )
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.16 Build 1 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... လိုင်စင်အတွက်
Patch + Crack ပါဝင်ပြီး Sharebeast, Zippyshare နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါ... သန်းထိုက်(ရွေရိပ်) ရေးသားထားတဲ့ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် မသိမဖြစ်နည်းပညာများ ဖြစ်တဲ့ (ကွန်ပျူတာနှင့် မကင်းသူများ၊ အိုင်တီနည်းပညာရပ်များကို သိရှိလိုသူများအတွက်) ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့အကြောင်းများ၊ ဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ ဘယ်လိုကာကွယ်ထားရမလဲဆိုတာကို အသေးစိပ်ရှင်းပြထားသည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာလိုသူများအတွက် Sharebeast, Dropboxm Minus သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လင့်မှ Download ယူနိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ.... Android အကြောင်း၊ Root အကြောင်း၊ Android နဲ့ Zawgyi အကြောင်း၊ Android ICS အထက်မှာ မြန်မာစာမမှန်တဲ့ အကြောင်း၊ Bootloader အကြောင်း၊ ClockworkMod အကြောင်း နှင့် ADB အကြောင်း အတိုချုပ်ရေးသားထားတဲ့ လေ့လာ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လော့လာလိုသူများအတွက် Sharebeast, Minus, Dropbox သုံးရောတင်ပေးထားပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လင့်ကနေ Download ယူနိုင်ပါတယ်။
Samsung Galaxy S4 တွင်ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု app လေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ဖုန်းထဲက ပျက်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းများလည်း ပြန်လည် ထည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ပါ အခြားဖုန်းတွေ မှာလည်းထည့်သွင်းစမ်းသပ်ကြည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ ရမရတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒီတစ်ခုလေး ပြန်ထည့်ဖို့အတွက်နဲ့ firmware ပြန်တင်ရမှာ မပူရတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ လိုရမယ်ရ ဆောင်ထားလို့လည်းရပါတယ်။
Latest Flash Player for Android Phones (lasted Version )
မင်္ဂလာပါ ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ app လေးကတော့ Android ဖုန်းများအတွက် flash player လေးပါ နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သူငယ်ချင်းများကလည်း တော်တော်လေး အသုံးများပါတယ်။ ဖုန်းထဲထည့်သွင်းထားရင် ဘာတွေ ထူးခြားလဲ စမ်းသပ် အသုံးပြုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်လေးမှ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါ ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ app လေးတွေကတော့ S4 မှာ Original ပါဝင်တဲ့ Wallpapers နဲ့ Ringtones လေးတွေကို သူငယ်ချင်းများ အသုံးပြုလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ။ S4 မဟုတ်တဲ့ အခြား devices တွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်လေးက ဒေါင်းယူသွားကြပါ။
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ facebook version အသစ်လေးထွက်လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ ဘယ်နေ့ကထွက်တာလည်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး ဒီနေ့မှ ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တာ update တောင်းလို့ဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ ပါ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲသွားတာတော့မရှိပါဘူး အသစ်လေးတွေကို သုံးစေချင်တဲ့စေတနာသန့်သန့်လေး နဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ။ အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်လေးကဒေါင်းယူသွားကြပါ။
ကွန်ပျူတာမှာ Zawgyi One နဲ့ရေးတဲ့ မြန်မာစာလေးတွေ အမြဲမြင်နိုင်အောင်
ဒါလေး သိတာသိပ်မကြာသေးဘူးဗျာ ကိုယ်လည်း ကွန်ပျူတာ သုံးနေတာ ကြာပြီ Zawgyi font နဲ့ရေးထားတဲ့ စာလေးတွေက အတုံးလေးတွေ ဖြစ်သွားရင် မလုပ်တတ်တော့ဘူး ဖြုတ်တတ်စနစ်ကိုဘဲ ကျင့်သုံးလာတာ ကြာရောပေါ့ ဟိုအရင် နှစ်လလောက်ကမှ အင်တာနက်မှာ ကွန်မန့်ပေးထားတာလေး လိုက်ဖတ်တော့မှ သြော် ငါ့အတွက် ပညာတစ်ကွက်ရတာဘဲဆိုပြီး မှတ်ထားတာလေး ပြန်မျှလိုက်တာပါ..မသိသေးရင်တော့ မှတ်သွားပေါ့..။ ကဲစလိုက်ရင် ကွန်ပျူတာ Desktop မျက်နှာပြင်မှာဘဲ Right Click>> Personalize >>Windows Color >> Advanced appearance Settings...>> ကိုနှိပ်ပြီးရင် Item: အောက်မှာ Icon ဆိုတာကိုရွေး နောက်ပြီး သူ့အောက်က Font နေရာမှာ Zawgyi -One ရွေးပေးလိုက်ပါ..။ ကဲဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာအတွင်းမှာ မှတ်ထား တဲ့ စာလေးတွေ သီချင်းလေးတွေကို ဒါမျိုးကြီး သီချင်းဘဲ ဒါစိုင်းဆီးဆိုင် သီချင်းဘဲ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ..။ မြန်မာ လိုရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကို မြင်နိုင်ပါပြီ..။ Backgroung ချိန်းတိုင်း ပြောင်းတိုင်း ဒီနည်းလေးနဲ့ လုပ်ပေးပါ.။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..။ အောက်မှာ ပုံလေးတွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ် မလုပ်တတ်မှာ စိုးလို့..။
မင်္ဂလာပါ... Router တစ်လုံးကို Setting ချနည်းကို ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... အဓိကကတော့ ကြိုးဖုန်းဖြင့် MPT က အင်တာနက်လိုင်းကို သုံးသူများ၊ CPE ဖြင့် WiFi လွှင့်ရောင်းသူများမှ ၀ယ်သုံးနေတဲ့သူ (အိမ်သုံးသမား)၊ လက်ဖေ့ရည်ဆိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ၀န်ဆောင်မှုအနေဖြင့် WiFi လွှင့်ပေးချင်သူများ အဆင်ပြေအောင် ရည်ရွယ်ရေးပေးထားပါတယ်။ ယခု Post ကိုလေ့လာယုံနှင့် Router တစ်လုံးကို ကိုယ်တိုင် Setting ချပြီး WiFi လွှင့်တတ်သွားမှာပါ။ လိုအပ်တာကတော့ အင်တာနက်ရရှိနေတဲ့ Network ကြိုးတစ်ချောင်းနှင့် Router တစ်လုံးပဲလိုအပ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ... Canon iP 3680 resetter ကိုတောင်းထားတဲ့ အကိုအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Resetter ပုံကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ် အသေးစိပ်ကို အောက်မှာဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါ...
Soft-bricked ဖြစ်နေတဲ့ Samsung Galaxy S4 GT-I9500, GT-I9505, SCH-I545 တွေကို Firmware ပြန်တင်ကြမယ်
မင်္ဂလာပါ ခုဖော်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ Soft-bricked ဖြစ်နေတဲ့ samsung galaxy S4 model သုံးမျိုးကို ပြန်ပြီး firmware ပြန်တင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ ကျွန်တော်လည်းဟိုရှာဒီရှာနဲ့ တွေ့တာလေး ပြန်လည်ဝေမျှပေးနိုင်တာပါ S4 ၀ယ်သုံးတဲ့ users တွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ data လေးတွေပါ။ ပြန်တင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးကို အောက်မှာ ပုံလေးနဲ့ပြထားပါတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ခင်မှာ လိုအပ်တဲ့ Data တွေဒေါင်းလိုက်ပါ့မယ်။
Mozilla Firefox, Google Chrome မှ BookMarks များ Backup လုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ... Widows ပြန်တင်မှာဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိရဲ့ Browser မှာ မှတ်သားထားတဲ့ BookMarks တွေကို Backup လုပ်ထားလိုသူများအတွက် Mozilla Firefox, Google Chrome မှ BookMarks များ Backup လုပ်နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းလေးက ခုနောက်ပိုင်းမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ ရေစိမ်ခံတယ်လို့ပြောတဲ့ Sony Xperia Z Jelly ကို Root ပြုလုပ်လို့ရမဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ အရင်တုန်းကလည်း ကျွန်တော်တင်ပေးဘူးပါတယ် ။ ဒီနည်းလမ်းလေးက အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးပါ။ အဲဒါကြောင့်မို့ ပြန်ပြီး ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးသွားလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ စိတ်ချလက်ချ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Model C6602 Android Version က 4.1.2 Build number က 10.1.A.350 ကိုစမ်းထားတာပါ လုံးဝ အမှားမရှိအောင်မြင်ပါတယ်။ ဘာမှ မပြောခင်မှာတော့ လိုအပ်တာလေးတွေ အရင်ဒေါင်းထားကြမယ်လေ.......
Read more... 11 comment
မင်္ဂလာပါ... ဂစ်တာသမားများအတွက် သီချင်းလက်ကွက် နုတ်များကို ဖော်ပြပေးမယ့် Songsterr v1.39 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... မိမိသိလိုတဲ့ သီချင်းကို အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး ရှာနိုင်ပါတယ် ပြီးရင် တီးကွက်တစ်ခုခြင်းကို နုတ်နဲ့ဖော်ပြပေးမှာပါ... အသေးစိပ်ကို https://play.google.com/store/apps/details?id=com.songsterr ကို click ပြီး Google Play မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... ဒါလေးတော့ သဘောကျလို့ရှယ်လိုက်တာပါ... လက်ကွက်တွေကို အနှေးအမြန်လိုသလို သင်ယူနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... WinRAR 5.00 Beta5(x86/x64) Update လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... WinRAR ကတော့ အားလုံးသိပြီးသားပါ Cbox မှာ တောင်းထားတဲ့ ဘော်ဒါအတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်.... 32/ 64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တင်ပေးထားပြီး RAR ဖိုင်အနေနဲ့ 32/64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တင်ပေးထားသလို 32, 64, keygen သုံးမျိုးကို လင့်ခွဲပြီး exe အနေနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်... တစ်ချို့ RAR ဆော့ဝဲလ်မရှိလို့ ဒေါင်းတာကို RAR နဲ့တင်ထားလို့ အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုး ရှိမှာဆိုးလို့ exe ပါတင်ပေးထားပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပြီး Sharebeastမှာတင်ပေးထားပါတယ်...
ယခုခေတ်တွင် Wifi ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် Wireless နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းပညာလို့အားလုံးသိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ Wifi ကိုကျနော်တို့ယခုဆိုလျှင် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ကိုအသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ YKKO ကဲ့သို့ကြေးအိုးဆိုင်မျိုးဆိုလျှင် သူတို့ဆိုင်များတွင် Wifi ကို လာရောက်စားသုံးသူများအတွက် Free ပေး၍စွဲဆောင်ထားသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Wifiကိုကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်အသုံးပြုလာကြတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ သိနေသော Wifi တွင် Standard အမျိုးမျိုး ရှိနေသည်ဆိုတာကိုတော့ တော်ယုံတန်ယုံ သတိပြုမိ ကြမည်မထင်။ ယခုအခါကျနော်တို့အနေနဲ့Mobile ဖုန်းများ၊Laptop များ၊ Router များဝယ်ယူသည် ဆိုလျှင် Wifi Specs ကိုကြည့်လိုက်မည်ဆိုလျှင် 802.11 a/b/g/n စသည်ဖြင့် တွေ့ မိကြမည်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ 802.11 a/b/g/n ဆိုတာတွေကဘာတွေတုန်း? ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးတွင်တော့ အဲဒီ 802.11 a/b/g/n တွေအကြောင်းကို ကျနော် အကျဉ်းချုံး၍ အနည်းအငယ်မျှ ရှင်းပြလိုပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ... Tablet အတွက် နာမည်ကြီး Anti-virus ဖြစ်တဲ့ Kasparsky Tablet Security ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Install လုပ်ပြီးသွားရင် မိမိအကောင့်ဖြင့် Sing Up လုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့သူများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
မင်္ဂလာပါ... Android ပိုင်ရှင်များအတွက် ကားပြိုင်ဂိမ်း Car Race by Fun Games v1.0 APK ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဖိုင်ဆိုက်က 47.5 Mb ရှိပြီး ကစားကောင်းတဲ့ ဂိမ်းလေးဖြစ်လို့ ကြိုက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်... အသေးစိပ်ကို https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fungames.carracefree ကို Click ပြီး Google Play မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ..... အင်္ဂလိပ်စကားပြော အတွက် အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော (ဦးသိန်းလွင် B.A) စာအုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...လေ့လာလိုသူများအတွက် Sharebeast, Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...